सचिवले किन गरे झुटो दाबी ? विद्युतीय बस चीनमै बनेको पाइयो | Buddhavumi News
१२ फाल्गुन २०७५ ११:४५ February 24, 2019 buddha vumiLeaveaComment on सचिवले किन गरे झुटो दाबी ? विद्युतीय बस चीनमै बनेको पाइयो
नागरिकलाई प्राप्त विभिन्न कागजात तथा मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रले बस चीनमै बनेको देखिन्छ । यसले मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइलाई गलत साबित गर्छ। मन्त्रालयका सचिव कृष्ण देवकोटाले बिहीबार बिदाइ कार्यक्रममा भाषण गर्दै बस भारतमा बनेको दाबी गरेका थिए ।
९ आश्विन २०७५ ०७:०५ September 25, 2018 buddha vumi
९ मंसिर २०७५ १०:१४ November 25, 2018 buddha vumi
२३ माघ २०७५ ०८:०६ February 6, 2019 buddha vumi
बिमस्टेक बैठकः नेपाललाई पर्यटन प्रवद्धनको अवसर
९ भदौ, काठमाडौं । आगामी भदौ १४ र १५ मा काठमाडौंमा हुने [पुरा पढ्नुहोस]
तिज मनाएर घर फर्कीदै गरेकी महिला लुटिइन
अनिल खत्री १८ भदौ, गुल्मी । धारिलो हतियार देखाएर [पुरा पढ्नुहोस]
गुल्मीमा पहिलो पटक निशुल्क बाथरोग शिविरःदुई सय बढिले सेवा लिए
टोपलाल अर्याल, गुल्मी, २३ कार्तिक । गुल्मीमा पहिलो पटक [पुरा पढ्नुहोस]
भक्तपुर । जिल्लामा प्रत्येक महीना दुई बलात्कारका घटना [पुरा पढ्नुहोस]
नगर बाल उद्यानमा ३ सय बिरुवा रोपियो
अनिल खत्री २२ जेठ, गुल्मी । विश्व वातावरण दिवसको [पुरा पढ्नुहोस]